Naya Post Nepal | महिनामै करोडौ कमाउने सलमानको नि’धन पछि उनको सम्पत्ती कस्को हुन्छ ? गरे सलमानले खु’ला’सा
महिनामै करोडौ कमाउने सलमानको नि’धन पछि उनको सम्पत्ती कस्को हुन्छ ? गरे सलमानले खु’ला’सा
अन्य बलिउड कलाकारले जस्तै उनले कसैलाई स’न्तानका रुपमा अ’पनाएका पनि छैनन् । बलिउ डका धेरै कलाकारले सन्तान अप नाएका छन् । उनले सन्तान पनि नअपनाएका का’रण उनको नि’धन पछि सलमानको सबै सम्पत्ती कसले पाउँछ भन्ने सबैको जि’ज्ञासा छ ।
उनको कुल सम्पत्ति २३ सय करोड भारतीय रु’पैयाँ हो। यस्तो अव स्थामा उनको सम्पत्तिको वा’रिस को होला ?
टाइम्स अफ इन्डियासँगको अन्तर्वार्तामा सलमानले भनेका छन् कि यदी उनले विवाह गरेभने उनको सम्पत्तिको आधी हि’स्सा उनको ट्र स्टमा जानेछ।
यो पनि ,,झापा । झापाको दमक–५ का दिनेश सिग्देलका ह’त्या’रा प”क्राउ परेका छन् । ह”त्या गरेको आ”रोपमा प्रहरीले दुई जनालाई प”क्राउ गरी मङ्गलबार सा’र्वजनिक गरेको छ ।
सुनसरीको धरान–४ स्थित जङ्गलमा विभत्स किसिमले ह”त्या गरी फालेको अवस्थामा ४३ वर्षीय सिग्देलको श’व भे”ट्टिएको थियो । प”क्राउ पर्नेमा सिग्देलकी कान्छी श्रीमती ३० वर्षीया अनिता केसी र उनका प्रेमी २९ वर्षीय सरोज भण्डारी रहेको प्रहरी उपरीक्षक संज यसिंह थापाले जा’नकारी दिए ।
प्रेमीसँग मिलेर श्रीमान्को ह”त्या गरी धरान–४ धरान भेडेटार सड कखण्डको जङ्गलमा जेब्रा झोलामा श’व हा’लेर फ्याँ’किएको पाइ एको थियो । यो’जनाबद्धरूपमा अनिता र सरोजले सिग्देलको ह” त्या गरेको प्रहरी अ’नुसन्धानबाट खुलेको थापाले जा’नकारी दिनु भयो ।
गत बुधबार टाउको र दाहिने खुट्टा जेब्रा झोलामा भे’टिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्को जेब्रा झोलामा बाँकी शरीर भे’टिएपछि प्र हरीले अनुसन्धान अ’घि ब’ढाएको थियो । प्रहरीले ह”त्यामा सं’ल ग्न अनितालाई सोमबार नै नि’यन्त्रणमा लिएको थियो ।
सिग्देलकी जेठी श्रमतीको ब’यानका आधारमा प्र’हरी अनिता र स रोजलाई प”क्राउ गर्न सफल भएको हो । दुवै जनाले सिग्देलको ह” त्या गरेको स्वी’कारेको प्र’हरीले जनाएको छ ।
२०७८ फाल्गुन ११, बुधबार प्रकाशित 1 Minute 394 Views